चियांग माईमा गर्न रमाईलो चीजहरू सडकको लागि एक जोडी
चियांग माई, जुन धेरै पर्वत र मन्दिरहरूले घेरिएको छ, थाईलैंडको उत्तरी राजधानी हो। यो दर्शकहरूको लागि थाई संस्कृति अन्वेषण र रमाईलो गतिविधिहरू गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ हो भनिन्छ। यहाँ चियांग माई, थाईल्याण्डमा रमाईलो चीजहरूको सूची छ जुन प्रत्येक पर्यटकले जीवनमा कम्तिमा एक पटक अनुभव गर्नुपर्दछ।
मुद्रा: थाई बात (30 baht को 1 USD सम्म)
स्थान: थाईल्याण्डको उत्तरी राजधानी
भ्रमण गर्न उत्तम समय: अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म (मार्च र अप्रिलमा तातो तापक्रम)
यातायात: एकै रातमा रेल, राति VIP बस वा बैंककबाट उडानहरू
एटीएमहरू जताततै पाउन सकिन्छ
चियांग माई मार्केट भ्रमण गर्दै
यहाँको बजारको संस्कृति अन्वेषण गर्न स्थानीय बजार हेर्नु उत्तम तरिका हो। बजारमा आउँदा तपाईले सबै भन्दा साधारण खानेकुरा महसुस गर्नुहुनेछ जुन स्थानीय मानिसहरूले प्रयोग गर्छन् (मासु वा तरकारीहरू), उनीहरूले बेच्ने तरिका र सामानहरू किन्दा, विशेषताहरू, इत्यादि।
चियांग माई, बजारहरू सडकको प्रत्येक कुनामा, हप्ता वा सप्ताहन्तमा, दिन वा रातको समयमा देखा पर्छन्। क्यान्डयुक्त खानाबाट ताजा एकमा, हात्ती प्यान्टबाट अन्य स्मृति चिन्हहरूमा, र अन्य, सबैले तपाईंलाई एउटा अविस्मरणीय मेमोरी दिन्छ। यहाँ चियांग मेलका केही प्रख्यात बजारहरू छन् तपाई एकपटक आउनु पर्नेछ।
शनिबार राती बजार: पुरानो प्यागोडा र Wua Lai Road को दक्षिण गेट बीच आयोजित भइरहेको, शनिबार रातको बजार तपाईं स्मृति चिन्ह र यात्रा उपहार खरीद गर्न को लागी हो।
आइतबार रात्रि बजार: तपाईं आइतबार रात्रि बजारमा विक्रेताबाट सबै चीजहरू किन्न सक्नुहुनेछ, जुन था फा फाटकबाट सुरु हुन्छ र रच्दामन्न रोड भएर पुरानो शहरसम्म फैलन्छ।
वारोरोट मार्केट (काद लुआ)): पर्यटकहरूको लागि सस्तो कपडा र घरका सामानहरू खरीद गर्नको लागि यो दिनको बजार हो।
बोर सांग (छाता गाउँ) मार्केट: यहाँका मानिसहरूले सजाइएका छाता र हस्तशिल्पहरू बेच्छन्।
मालिन बजार: यो आगन्तुकहरूको लागि रात्रिभोज खाने, किनमेल गर्न, गहना र कपडाहरू खरीद गर्न, र स्थानीय विशेषताहरूको आनन्द लिनको लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो।
लालटेन फेस्टिवलमा भाग लिदै
चियांग माई यसको लालटेन चाडहरु को लागी प्रसिद्ध छ लो Krathong र यी पेंग। यो अवसर शहर को जादू को मजा लिन सबै भन्दा राम्रो समय हो भनिन्छ। प्रत्येक महिनाको नोभेम्बरमा, मानिसहरूले आनन्दित र धनसम्पन्न जीवनको लागि प्रार्थना गर्ने इच्छा गर्दै गरेको बेला हजारौंको उज्यालो लालटेनलाई हावामा पठाउँछन्। जे होस्, यस घटनामा शामिल हुन, तपाईले महिनौं वा हप्ता अघि बुक गर्नुपर्नेछ। साथै, जब तपाईं सामग्रीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, बाँसको लालटेनहरू प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस् किनभने तिनीहरू वातावरण मैत्री छन्।
एक भिक्षु संग कुराकानी
एक भिक्षुसँग कुरा गर्न एक घण्टा बिताउनु र दैनिक जीवनको बारेमा सबैलाई सोध्नु एक रमाईलो अनुभव हो जुन प्रत्येकले प्रयास गर्नुपर्दछ। चियांग माईका मन्दिरका भिक्षुहरू कुरा गर्न र खुला विचारका लागि इच्छुक छन्, त्यसैले उनीहरूले तपाईका समस्याहरू कसरी प्रभावकारी र तर्कसंगत समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सल्लाह दिनेछन्।
एक भिक्षुमा विश्वास गर्न, तपाईले पहिले "भिक्षु च्याट" कार्यक्रमको साथ मन्दिर छनौट गर्नु पर्छ। त्यसो भए, साईन ईन गर्न सोमबार, बुधवार वा शुक्रवार दिउँसो (5 अपरान्ह7अपरान्ह सम्म XNUMX अपरान्ह) पुग्नुहोस् र तपाईं भिक्षुलाई भेट्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, उपयुक्त कपडा लगाउनुहोस् जुन घुँडा र काँधमा कभर हुन्छ जब तपाईं मन्दिर जानुहुन्छ।
डोई सुतेप मन्दिरको भ्रमण गर्दै
डोई सुतेप मन्दिर नपरिकन चियांग माई भ्रमण गर्नु प्रत्येक पर्यटकको लागि ठूलो गल्ती हो। यो थाईल्यान्डको सबैभन्दा सुन्दर मन्दिरहरू मध्ये एक मानिन्छ। यदि तपाईं यहाँ घमाइलो दिनमा आउनुभयो भने, तपाईंले चियांग माई शहरको मनोरम दृश्य पाउनुहुनेछ। यस प्रसिद्ध मन्दिरको भ्रमण गर्नका लागि सबैभन्दा सहज तरिकाले भीडबाट बच्न बिहान सबेरै प्रयास गर्नुहोस् र आरामदायक जुत्ता लगाउनुहोस् किनकि तपाईं धेरै हिंड्नु पर्ने हुन्छ।
डोई सुतेप मन्दिरमा पुग्नको लागि, पहिला रातो ट्रक शहरबाट डोई सुतेप समात्नुहोस्। पहाडीमा जानको लागि यसले तपाईंलाई 60 बात र अधिकतम 45 मिनेट लिनेछ। त्यसोभए,2-3घण्टा पर्वतारोहणको लागि खर्च गर्नुहोस्, जहाँ डोई सुतेप मन्दिर अवस्थित छ।
हात्तीलाई नजिक हेर्नु भनेको विशेष गरी चियांग माई र सामान्यतया थाइल्याण्डमा गर्नुपर्ने एउटा क्रियाकलाप हो। त्यहाँ केही प्रमुख हात्ती अभयारण्यहरू छन् जुन तपाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ कञ्चनबुरीमा हात्तीको विश्व, एलिफन्ट नेचर पार्क, Kindred आत्मा एलिफन्ट अभयारण्य, र यस्तै। समस्या यो हो कि तपाईंले जिम्मेवार रूपमा भ्रमण गर्नुपर्नेछ। यसको मतलब यो हो कि तपाईंले चिडियाखानाको कडा नियमहरू पालना गर्नुपर्दछ। तपाईको ब्यवहारले हात्ती र स्थानीय मानिसहरुलाई अझ राम्रो जीवन दिन सहयोग पुर्‍याउँछ।
हात्तीहरूलाई अर्को तरीकाले हात्ती परेड भूमिलाई भ्रमण गर्नु हो। यो जीवन आकारको बच्चा हात्ती मूर्तिहरूको घर हो, जुन दुबै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूले चित्रित गरेका थिए। तपाईं यी मूर्तिहरू आफन्तहरू र साथीहरूका लागि स्मृति चिन्हको रूपमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
बुवा पेटी झरना (चिप्लिए झरना) माथि चढाई
तपाईं सोच्नुहुन्छ कि धेरै झरनाहरू चिप्लो चट्टानहरू र द्रुत गतिमा पानीको कारण फिसलनमा छन्, हैन? यो सत्य हो, तर चियांग माईमा बुवा थो Th्ग झरनाहरू फरक छन्। तिनीहरू खनिज भण्डारमा धनी छन्, त्यसैले चट्टानहरू भुरभुराइयो। यसले तपाईंलाई खुला खुट्टाले माथि चढ्न अनुमति दिन्छ। त्यहाँ झरना को विभिन्न वर्गहरु छन् तपाईं चढ्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै तल सबै भन्दा राम्रो छ। यो जहाँ पानी तीस फिट बाहिर झर्छ, त यो एक छ आदर्श स्थान तपाईलाई तातो दिनमा चिसो पार्नका लागि। झरनाहरू खेल्नु भएपछि, तपाईं माथिबाट माथिल्लो सिढीहरूमा स्प्रिंग देख्नुहुनेछ। यो सुन्दर निलो पानी संग गहिरो होल्ड छ।
चियांग माईबाट बुवा थोong्ग झरनाहरू जानको लागि, तपाईं मोटरसाइकल भाडामा लिन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्न भने, रातो ट्रक समात्नु उत्तम तरिका हो।
च्यांग माई वरिपरि एक खाना यात्रा गर्दै
चियांग माई यसको स्वादिष्ट खाना र खाना पकाउने कक्षाको लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ, तपाइँ राती बजार जान सक्नुहुनेछ धेरै प्रकारका क्षेत्रीय विशेषताहरूको आनन्द लिन। चियांग माईको भाँडामा अक्सर सुख्खा मसला वा तीतोपन हुन्छ। यहाँ केहि खानाहरू छन् जुन तपाईंले यस शहरमा छुटाउनु हुँदैन:
फ्राइड ल्याब - कीराएको मासु स्थानीय सुक्खा मसलाको साथ रगडियो
खाओ सोइ - एक धनी बर्मी-प्रभावित नारियल करी सूप, क्रन्ची नूडल्सको साथ छरिन्छ
मसलादार कीराले सुँगुरको टमाटर डुबकी
नाम एनजीआओ - सुँगुरको मासु संग एक tangy टमाटर नूडल सूप
डोई सुतेपको वरिपरि सवारी गर्दै
यद्यपि चियांग माई थाईल्याण्डको चौथो ठूलो र सब भन्दा आधुनिक शहर हो, यो अझै पनि पहाड र जgle्गलले घेरिएको छ। तसर्थ, यदि तपाइँ प्रकृतिको नजिक बस्न चाहनुहुन्छ भने, एक पर्वतारोहण यात्रामा भाग लिनुहोस्। यसले तपाईको स्वास्थ्यलाई अभ्यास गर्न मात्र मद्दत गर्दछ, तर तपाईले चियांग माईको बिभिन्न दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ।
एक मुय थाई बक्सि M खेल साक्षी दिँदै
एक Muay थाई बक्सि M खेल देख्न एक जरूरी छ जब तपाईं चियांग माईमा पुग्ने मौका छ। समान रूपमा, तपाईं जिममा कक्षामा भाग लिन सक्नुहुन्छ। दुबै कक्षा कोशिस गर्दै र एक खेल हेर्दा तपाइँलाई विशेष अनुभूति हुन्छ।
थाईल्याण्डको चियांग माईमा हामीले नौ रमाईलो चीजहरू तपाईंलाई परिचय गराएका छौं। यी चीजहरू तपाईंलाई यात्राको बखतका अविस्मरणीय क्षणहरू ल्याउने आश्वासन दिन्छन्। के तपाईं कहिल्यै यो शहर जानु भएको छ? यदि हो भने, आफ्नो अनुभव हामीलाई साझा गर्नुहोस्। यदि होईन भने हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो लेख तपाईलाई उपयोगी छ। पढ्न को लागी धन्यवाद।
म एमिली फाम हुँ। म भियतनाममा जन्म भएको थिएँ - धेरै अज्ञात समुद्री तट, ऐतिहासिक साइटहरू, र पर्यटक आकर्षणहरू सहितको देश। भोलि भियतनाम एक प्रसिद्ध गन्तव्य हो भनेर बुझ्दै, म ब्लग साइट स्थापना गर्दछु vina.com भियतनामको सुरुचिपूर्ण सुन्दरतालाई संसारभरिका साथीहरू परिचय गराउने उद्देश्यका साथ। यदि तपाईं भियतनामको यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो ब्लगले तपाईंलाई कहाँ जाने र हाम्रो देशमा के गर्ने भन्ने बारेको आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ।
श्रेणी: एशिया, अतिथि पोस्टहरू, थाईल्याण्ड, यात्रा योजना टैग: एशिया, चियांग माई, अतिथि पदहरू, थाईल्याण्ड
← कहाँ लिस्बन मा पोलो सङ्गीत पत्ता लगाउन, पोर्टेबल
अल्टिमेट क्रीम चीज गाइड - पेयरि ,हरू, सुझावहरू र अधिक! →